Fursadaha Tabaruca ee Guryeynta iyo Guri la'aanta | Tonka Adeegaa
St. Stephens Adeegyada Aadanaha
Adeegyada Aadanaha ee St. Stephen waxaa lagu aasaasay hadaf ah in lagu joojiyo hoy la'aanta iyada oo loo marayo barnaamijyo ay ka mid yihiin fursadaha guryaha, taageerada shaqada, adeegyada degdegga ah iyo wacyigelinta, iyo isbeddelada nidaamyada.
Wadooyinka Dhallinyarada Guri la’aanta ah
Wadooyinka loo helo Dhallinta Hoylaawayaasha ah waxay bixiyaan hoy deg-deg ah, guryo muddo-gaaban ah iyo adeegyo taageero ah oo loogu talo-galay dhalinyarada hoylaaweyaasha ah ee ku nool bey'ad ammaan ah iyo nafaqeyn leh.
Tabaruceyaashu waxay gacan ka geystaan Bridging inay fuliso himiladeena bulshada, sanad walbana kumanaan qof ayaa waqtigooda ugu deeqa si ay u taageeraan qoysaska maxalliga ah ee u baahan. Iyada oo la heli karo fursado badan oo shaqsi iyo kooxeed, waxaa jira siyaabo badan oo aad ku caawin karto qoysaska iyo carruurta ka soo gala albaabadayada.
Wadajirka Diinta & Wada-hawlgalayaasha Bulshada ayaa ka jawaabaya baahiyaha degdegga ah, waxay qoysaska u dhaqaajineysaa xagga xasilloonida iyo is-beddelka wanaagsan, waxayna ka qayb qaadanayaan mutadawiciin iyo la-hawlgalayaasha adeegga, hoggaaminta, iyo dhisidda awoodda.
Waxaa la furay 2015, Hope House waa lix-sariir, hoy deg-deg ah oo waqti-gaaban ah oo loogu talagalay dhalinyarada da'doodu tahay 14 –19 ee bilaa hoyga ah ama khatar ugu jira guri la'aan. Waxay ku taal Excelsior, Hope House waa hoyga kaliya ee dhalinyarada ee ku yaal Galbeedka Wadada 100 ee magaalooyinka Mataanaha ah. Guri raaxo leh, oo 2-dabaq ah oo la dego oo dhallinta oo dhan lagu soo dhoweeyo, Hope House waxay ujeedadeedu tahay inay caawiso dhallinyarada ka socota xaafadaha koonfur-galbeed iyo bulshooyinka ku xeeran.
Xarunta Marie Sandvik
Xarunta Marie Sandvik waa masiixi saldhigeedu yahay 501 (c) 3 hay'ad samafal oo aan faa'iido doon ahayn oo bixisa waxyaalaha iyo baahiyaha ruuxiga ah ee dadka saboolka ah ee ku nool gudaha magaalada. Tabaruceyaashu waxay u baahdeen inay u adeegaan cunto, ku deeqaan dhar ayna kormeeraan barnaamijyada carruurta.
Adeegyadeena Bulshada ee Badbaadiyeyaasha ah
Bartamaha xaafadda Phillips ee Koonfurta Minneapolis, Adeegyadeena Bulshada ee Badbaadiyeheenna waa hay'ad adeegyada bulshada u heellan wax ka qabashada baahiyaha ka jira bulshada, laga bilaabo hoy la'aanta ilaa saboolnimada urursan iyo fogeynta muhaajiriinta iyo qaxootiga.
Si loogu adeego carruurta hoylaaweyaasha ah iyo qoysaskooda loona siiyo fursado cusub nolol caafimaad oo deggan oo qoys. Dadka u adeegaya dadka waxay ku guuleystaan hadafkooda iyo himilooyinkooda iyagoo siinaya guryo deg deg ah iyo adeegyo jaaliyadeed oo ka caawiya qoysaska la soo deristay hoy la'aanta inay noqdaan kuwo isku filan oo ay dib ula xiriiraan bulshada.
Nalalka Dekedda Salvation Army
Minneapolis Harbor Light Center waxay siisaa caawimaad deg deg ah, hoy, hoy, daaweynta ku tiirsanaanta kiimikada, guryaha ku meel gaarka ah, adeegyada daryeelka caafimaadka iyo taageerada ruuxiga ah ee macaamiisheeda.
Wadaagista iyo Daryeelka Gacmaha iyo Meesha Maryan
Waxay siisaa guryo deg deg ah, cunno iyo adeegyo loogu talagalay qoysaska la soo deristay hoy la'aanta. Tabaruceyaashu waxay diyaariyaan oo u adeegaan cuntada, waxay abaabulaan darawallo loogu talagalay cuntada iyo sahayda waxayna u shaqeeyaan sidii caawiyeyaasha daryeelka carruurta ee Guryaha Ku-meelgaarka ah ee Mary.
Adeegga Guryeynta ee Simpson
Sannad kasta, Adeegyada Guryeynta ee Simpson waxay siisaa hoy, guryo la awoodi karo, iyo adeegyo taageero kumanaan rag ah, dumar iyo carruur ah oo la soo deristay hoy la'aan.
Twin Cities Habitat waxaa ka go'an inay dhisto tayada nolosha, caafimaadka iyo barwaaqada gobolka iyada oo loo marayo soo saarista iyo ilaalinta lahaanshaha guryaha – maxaa yeelay guryaha iyo qoysasku waa aasaaska bulshooyinka guuleysta.